talooyin shukaansi. Yaa bixiyo?.
Yaa bixiya On Date A First?
Last updated: Aug. 21 2019 | 3 min akhri
Ha iga soo wac “Sugar”
Dhowr sano ka hor, Waxaan soo baxay naag saddex jeer laba todobaad. Waxaan u qalmay bixisay wax walba, oo ay ku jiraan dersin bagelka mid saaka markii ay xaqiiqsadeen iyada lahaa iyada boorsada illowday. Waxay si deeqsinimo leh ku bixiyey in la soo qaado taariikhda soo socda.
Waxay maalinta ku xigta ayaa ii yeedhay goobta shaqada si ay ii sheeg sheegtay inay maqashay of riwaayad ka dhawaajisay sida madadaalo. Waxa ay sheegtay in mashquul iyo weydiiyay waxay ahayd haddii aan heli karin haddii ay jiraan kuwo tigidhada laga heli karaa. Dhibaatada No. Waxaan u yeedhay tiyaatarka iyo bartay waxaa yiil lix bidix oo kaliya. Waa maxay nin u sameeyo? No arin wayn, Waxaan soo iibsaday labo ka mid ah tigidhada iyo is tusay qaado lahaa ilaa casho ka hor inta aan dibadda u soo baxday.
Ka dib markii aannu $40 cuntada, waxay u hoos kaarka deynta hoos u dhigay oo galay inuu xamaamka. Markii ay u yimaadeen dib, iyada ogaaday inaanan ku riday credit card si aan u soo qaado ama kala qaybsan tahay jeegga. Marka taas oo ay codeed ii at oo ku yidhaahdeen, ton ah mariidka oo aan wax falgal la leh oo aad u adag: 'Maxaan, aad mama sonkorta?!’
Haa, isagoo nin ma aha had iyo jeer waxa ugu abaal adduunka. Laakiin waxa jira aad qeybiso sameeyo? Waxaan joojiyey yaabban waxa ka “cadaalad” oo ay go'aansadeen in ay ku mintidaan nidaamka Waxaan dhaxlay. Nidaamkaas, nin xagga Eebeyna u bixinaya, oo haddii qof dumar ah oo bixisa in ay bixiyaan, waxa uu u malaynayay in ay tiraahdo maya. Ugu yaraan on taariikhaha ugu horeeya. Ama in alla intii ka immaanaya. Ama waxaa laga yaabaa in mar walba. Waxay ku xiran tahay qof dumar ah. Waxaan marna ma ogaan karno waxa dhacay haddii dejiyeen ilaaladayda iyo ogolaan inay qaado jeeg. Iyo markaas, waxa inta badan ay goori goor tahay in la sababeeyo dabeecadaada siman.
Tani waa Doolaal oo ah xaq dhan, mana jirto wax jawaab sax. Sida nin oo ahayd on taariikhaha aad u tiro badan, Waxaan maqlay oo dhan Stories labada dhinac iyo xagal kasta. Laakiin tan iyo macquulka ah uma muuqato in ay helaan play badan ee boqortooyadan, Qeybiso waxaan ahay siin waqti wajiga qaar ka mid ah.
Waxa ay dadku sheegayaan:
HER: Waa in uu doonayo in uu bixiyo ii.
Haa, iyo, Guud ahaan, in uu yahay kiiska. Deeqsinimada, gaar ahaan in qof aad daryeesho, waa dareen cajiib ah – xaq halkaas, Waxaan u sheegay, iyagoo aanan wax kasta oo kharajkeeda ay qof kale.
Xaggiisa: Waxay filaysaa ii bixiso wax kasta oo.
Haa, iyo in ay sumaddii in la aasaasay hab ka hor aad dhalatay. Ha u dagaalamaan, kaliya waxaa qaban isagoo dhoolacadeynaya, sababi haddii aadan, waxaad aanu helin taariikh kale.
HER: Aadaayaa, gaar ahaan bilowga hore.
Sababaha macquulka ah Tani waa wax yar dicier. Maxaad nin bixiso waa in? Sababta oo ah waxa ay chivalrous? Ka fikir chivalry in bilowday waqti ay ragga shaqeeyay iyo dumarka aan sameeyey. Haweenka, macno ahaan, aysan bixin karin. Saasaana, rag soo gaaray jeegga soo baxay lagama maarmaan, ma out of naxariis. Waxaa tan iyo markii la degsan galay code mudane ah ee, taas waxaa loo arkaa in dhadhanka aad u liita su'aasha. Waxaan aan su'aalo, laakiin aad u aragto sida idiin cadhooday oo waa in aan xitaa keenaya ilaa?
Xaggiisa: Laakiin baxay wax iga weydiiyay.
Sidaas waxa? Haddii dhaqanka ayaa sheegay in aad bixiso maalinta koowaad, oo iyana waxay rajeynaysaa inaad ku bixiso maalinta koowaad, iyo awoodid in aad iska bixiso maalinta koowaad, markaas bixiso taariikhda maydhan biyaha koowaad.
HER: Wax macno ah ma waxa uu ka dhigayaa. Mudane A mar walba.
Haddii nin ka dhigaysa tan ah ee lacagta, Waxaan idiin xaqiijin karaa, waa inuu farxad buuxda iyo farxad inaan baxaa si loogu daweeyo kasta cabitaanka iyo HBS ee la soo dhaafay oo aad ula dhaqmaan sida amiirad aad shaki la'aan tahay. Laakiin waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya isagoo raqiis ah iyo in dadka saboolka ah. Cheap macnaheedu waa nin ku weydiiyo inuu taariikhda inaad bixiso kalluunka markii uu amar ku bixiyay in digaag raqiisan. Poor ka dhigan tahay in nin ayaa dhibaato samaynta kirada haddii waxa uu leeyahay in uu bixiyo shan taariikhaha in muddo bil ah. Naftaada booskiisa: waa adag tahay in isaga lagu eedeeyo raba in jeegag kale ah.
My xal waa, ma la yaab leh, equivocation ah. Aan dhan isku dayaan in midna midka kale. Guys, noqon sida deeqsinimada leh ee suurtogal ah, ma ahan oo keliya maxaa yeelay, iyadu aad filaysaa in, laakiin sababtoo ah waa si dhab ah faa'iido u leh “noqon nin ka” oo uu si sahal ah nolosha iyada. Haweenka, in ay u dabacsanaadaan ardayga Goon ama schoolteacher in uusan haysan hab ay u noqon sidii chivalrous sida uu jeclaan lahaa in uu noqdo. Waxaa laga yaabaa inaad ma noqon mamas sonkorta noo, laakiin fadlan ha iska falno uun oo aynu ku jirno aad ATM ee, Okay?
Romance, A Dareenka ama wax aan sameyn?
Qaas ah Gift of GUUSHII
Kara xasaasiyad Butros iyo saanqaadi Dating?